ဘ၀ကူးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သဿတဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံ၊ ဖြုတ်ပုံ	Posted on November 6, 2009	by mettayate သဿတဒိဋ္ဌိ = ရုပ်တရား နာမ်တရား တစ်ပါးပါးကို မပျက်မစီး အမြဲတည်နေတယ်လို့ အယူမှားတာ။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ရဟန္တာ သမုတ်ခံရသော လှေသင်းမင်း ဆရာတော် ၏ ဆုံးမစာ
Htet says:	November 7, 2009 at 3:19 pm	hi sis, this post is very good. Actually, all the posts in this blog enlighten us. Really appreciate this blog and thanksalot to you and your effort! Keep going!😀
Reply	mettayate says:	November 8, 2009 at 4:57 pm	ညီမရေ… ခုလို အကြံပေးတာတွေ ရရှိတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ညီမလည်း ခုလို ဆရာတော်ရှင်းပြသလိုမျိုး သဿတဒိဋ္ဌိ စင်ရင် မဂ်ဖိုလ်ရဖို့ လမ်းကြောင်းပွင့်သွားတာပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့. ကျမ အချိန်ရရင် ရသလို နောက်ထပ်ပို့စ်တွေ တင်သွားပေးပါမယ်။ ညီမအနေနဲ့လည်း အချိန်ရှိမယ်ဆိုရင် အရှင်ဇ၀န ရွှေပြည်သာ (မေတ္တာရှင်) ရေးသားသည့် လူငယ်များအတွက် ဂမ္ဘီရ၀ိပဿနာ အတွဲစာအုပ်တွေကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် လို့ အကြံပေးတိုက်တွန်းပါတယ်။ အဲဒီမှာတော့ ပိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတာပေါ့။